Inyangazonke ngama-clots, futhi nokuya esikhathini okungavamile noma okubuhlungu kwenzeka esikhathini sokuphila kwanoma yimuphi owesifazane. Njengomthetho, ukubonakala okufanayo kwezimpawu ezinjalo akusho ukuthi kukhona isifo. Kodwa uma izinkinga zibonakala kusukela ngenyanga kuya enyangeni, khona-ke lesi yisikhathi sokucabanga ngempilo yesigaba sakho socansi.
Ngokuvamile, ukuhamba ngezindwangu kuningi kakhulu. Uma kwenzeka ukuthi umthamo wegazi elahlekile ungaphezu kwamagremu angu-80, ukulahleka kwegazi kubhekwa njengongathí sina, okwazi ukulimaza impilo yowesifazane. Ngenxa yokuphuma kwegazi okwedlule ngenyanga, i-anemia ivela kubafazi, ngakho-ke uma inani legazi linikezwa ngesikhathi sokuya esikhathini, kufanele nakanjani uthintane nodokotela.
Futhi ungabheka kanjani ngokuzimela ukuthi ingakanani igazi elahlekelwa ngesikhathi sokuya esikhathini. Ukuze wenze lokhu, udinga ukukala isamba sokuhlanzeka okuhlanzekile, bese usihlola futhi ngemva kokusetshenziswa. Umehluko phakathi kwamagugu amabili uzolingana nomthamo wegazi elahlekile. Kubalulekile ukubhala phansi lemiphumela phakathi nenyanga yonke, bese uvele uhlanganise amanani atholakalayo.
Ngendlela, uma owesifazane enesifo se-anemia, ukutholakala kwalesi sifo kungaba yisizathu sokuthi i-cloth ivele ngesikhathi sokuya esikhathini. Ngakho-ke, njengesilinganiso sokuvimbela, kubalulekile ukudlulisa ukuhlolwa kwegazi ezingeni lika-hemoglobin. Ngokuvamile, ngemva kokuqeda izibonakaliso ze-anemia, ama-clots ekukhuleni kokuya esikhathini aphela.
Isithombe esivela kancane siyabonakala uma ukuya esikhathini kunomfazi omusha osanda kunikelwa. Uma sekudlulile inyanga kusukela ekuzalweni, imbangela yokwakheka kwezindwangu kungase kube khona izinhlayiya ze-placental esibelethweni. Kulesi simo, ukukhishwa kwesigcawu sesisu kubhalwe. Esinye isizathu sokukhishwa okungavamile kungase kungabi nakwanele ukuchithwa kwe-uterine, lapho kutholakala lokho, iziguli zibekwe izidakamizwa ezisiza ukuletha lesi sibeletho emuva kokubeletha.
Ngokuvamile njalo ngama-clots kwenzeka ngokumelene nesizinda sezifo ezandisa ukwanda kwegazi. Ngaphezu kwalokho, ukukhubazeka okunjalo kungenzeka ngesifo se-thyroid, ukutholakala kwesinye isifo sokuvuvukala, ngemuva kokungenelela kwe-intrauterine, kanye nokuba khona kwabesifazane abenza imikhuba emibi, ehlanganisa ukuphuza utshwala nogwayi.
Esinye isifo esibangela ukubunjwa kwezindwangu ngesikhathi sokuya esikhathini kuwukuphela kwe-endometriosis. Ngaphambi kwalesi sifo, ngaphezu kwalesi sibonakaliso, abesifazane baqaphela ukuba khona kwebala lokubona indawo eside ngemva kokuphela kokuya esikhathini.
Izimbangela eziholela ekugcineni kwe-endometriosis azikacaci ngokuphelele. I-Endometrium ungqimba lwama-mucous, ngokuvamile oluhlala emgodini we-uterine, kulawo ungqimba ukuthi iqanda lomntwana wesilisa lihlanganiswe lapho ukhulelwe. Isifo se-endometriosis sibonakala ukuthi i-endometrium iyaqalwa futhi iqala ukumboza ezinye izitho - ama-ovari, ama-tublopian tubes, njll. Kukholelwa ukuthi ukugqugquzela ukuthuthukiswa kwalesi sifo kungukuhluleka kwamasosha omzimba.
Ukutholakala kwe-endometriosis kungabangela ukungabi nabantwana, ngenxa yokwanda kwezicubu kunezinkinga zokuvuthwa, futhi ukuvama kwamatayipi okulala kunciphisa . Ukwelashwa kwe-endometriosis ngezidakamizwa ze-hormonal, ngezinye izikhathi kufanele usebenzise izindlela zokuhlinza. Odokotela bamazinyo zanamuhla benza ukuhlinzeka kwe-laparoscopic, okuvumela ukungenelela okuncane okudabukisayo.
Ngakho-ke, ukubonakala kwezindwangu ekukhithweni kokuya esikhathini kungase kube umphumela wesifo esibucayi. Uma uqaphele lokhu, ungahlehlisi ukuvakashela ku-gynecologist ebhokisini elide.
Amachashazi abomvu ekhanda lepenisi